Fumana ezona ntengiso zibalaseleyo ze-11.11 kwi-eBay | Iindaba zeGajethi
I-11.11 iye yaba liqela elitsha lezibonelelo, ezifumana ukuthandwa minyaka le. Iivenkile ezingaphezulu ziyajoyina ezi zinto zibonelelweyo, njenge-eBay, esishiya ngothotho lwezibonelelo kuwo onke amacandelo ayo. Eyona nto ilunge kakhulu, awuzukulinda de kube ngu-Novemba 11 ukuze uthathe ithuba lokunyuselwa kwivenkile, kuba izibonelelo ezikhoyo namhlanje.
Ke ngoko, ngezantsi siza kukubonisa ifayile ye- Olona hlobo lubalaseleyo unokufumana kwi-eBay kumsitho wale 11.11. Ivenkile edumileyo isishiya nezinto ezininzi ezikhethiweyo. Ngokuqinisekileyo kukho into onomdla kuyo. Ukulungele ukufumanisa malunga nezi zibonelelo?
1 Uthotho lweApple 4 ngexabiso lama-euro angama-424
2 I-PS4 + Red Redemption 2 ngexabiso lama-euro angama-339,95
3 I-iPhone XS Max ene-20% isaphulelo ngexabiso le-1249,99 euros
4 IMacBook Pro ngexabiso le-1.199 euro
5 IXiaomi Mi Band 3 ene-21% isaphulelo kwixabiso lama-euro angama-23,64
6 Galaxy Note 9 ngesaphulelo esingu-40% ngexabiso lama-euro angama-649,99
7 I-Apple iPad enesaphulelo sama-22% ngexabiso lama-euro angama-349,99
7.1 I-Galaxy S9 Plus ngesaphulelo sama-41% ngexabiso lama-euro angama-579,99
8 I-Huawei Mate 20 Pro ngesaphulelo se-14% ngexabiso lama-euro angama-799,99
9 I-Apple Watch Series 3 ngesaphulelo se-22% ngexabiso le-299,99 euro
Uthotho lweApple 4 ngexabiso lama-euro angama-424
Isizukulwana esitsha seApple smartwatch ifikelele kwintengiso ngobuninzi bezinto ezintsha, ukongeza kutshintsho loyilo. Sifumana isikrini esikhulu, esibonelela ngamava omsebenzisi angcono. Ujongano luye lwaguqulwa, njengoko ngoku kulula kakhulu ukuba umsebenzisi alusebenzise. Ungqamaniso ne-iPhone ilula, ke siya kuba nakho ukufumana uninzi kule smartwatch. Eyona nto intle kwimarike yanamhlanje.
I-eBay isizisela olu luhlu lwe-Apple Watch 4 ukuya kwi Ixabiso elikhulu lama-euro angama-424 kolu nyuselo. Ithatha isaphulelo se-7% kwixabiso laso loqobo.
I-PS4 + Red Redemption 2 ngexabiso lama-euro angama-339,95
Ukuba kukho umdlalo okwangoku otshayela iiconsoles, yiRed Dead Redemption 2. Umdlalo ngowona mthengisi uphambili, osele ungoyena mdlalo uphumeleleyo kwiPS4. Ke yeyiphi indlela ebhetele yokukuzisela ikhonsoli yeSony kwiphakeji yalo mdlalo uthandwayo. Ungayonwabela ngabo bonke ubungangamsha bayo kwikhonsoli eyaziwayo kakhulu kwintengiso. I-PS4 eza nenkumbulo ye-1 TB, ngokungathandabuzekiyo eya kuthi isinike amathuba amaninzi xa isiza ekuyisebenziseni.
Le pakethi enekhonsoli kunye nomdlalo Iyafumaneka ngexabiso lama-euro angama-339,95 kolu nyuselo lwe-eBay. Ithuba elihle lokucinga. Musa ukumsindisa.
I-iPhone XS Max ene-20% isaphulelo ngexabiso le-1249,99 euros
Isizukulwane esitsha se-iPhone, esivezwe ngo-Septemba, sifikile sinezinto ezimbalwa ezitsha. Enye yeemodeli ezintsha ze-Apple yile XS Max. Une Iscreen se-6,5-intshi, kwaye ngaphakathi kwiprosesa entsha yenkampani silindelwe, i-A12. Iza kunye ne-256 GB yokugcina yangaphakathi, ngokungathandabuzekiyo isinika amathuba amaninzi xa kuziwa ekugcineni iifayile kwifowuni. Ngasemva sinekhamera ephindwe kabini ye-12 + 12 MP, ngelixa enye ye-7 MP isilindile ngaphambili. Imodeli esemgangathweni, enesikrini esifanelekileyo sokutya umxholo.
Esi sixhobo Iyafumaneka ngexabiso lama-euro angama-1249,99 kolu nyuselo kwi-eBay. Sisaphulelo se-20% kwixabiso laso loqobo. Ungayivumeli ukuba ibaleke!
IMacBook Pro ngexabiso le-1.199 euro
Iilaptops zeApple zaziwa kwihlabathi liphela ngomgangatho wazo. I-eBay ngoku isishiya nale MacBook Pro, emele ukuboniswa kwayo kwe-retina ye-intshi ezili-13. Umgangatho obalaseleyo, owenza ukuba ibe lilaptop efanelekileyo ukuze ube nakho Sebenzisa umxholo wemultimedia, ukongeza ekusebenzeni kwifoto, ividiyo okanye ukuhlela kuyilo ngesiqhelo. Iza kunye ne-128 GB ye-SSD, kunye ne-8 GB RAM. Ineprosesa ye-Intel Core i5 ngaphakathi, eyinika amandla amakhulu.
Sifumana le laptop ngexabiso le-1.199 euro kwivenkileKumsitho wezi 11.11. Ukuba ujonge imodeli esemgangathweni, ungaphoswa leli thuba lokuthatha le laptop ngexabiso elihle.
IXiaomi Mi Band 3 ene-21% isaphulelo kwixabiso lama-euro angama-23,64
Isizukulwana sesithathu sezacholo zeXiaomi ungene kwimarike ngotshintsho oluphawulekayo loyilo, njengoko isikrini ngoku sikhudlwana, kunye nokubambeka ngokupheleleyo. Le yinto eyenza ukusetyenziswa kwayo kube lula ngalo lonke ixesha. Isinika imisebenzi yeklasikhi, njengokugcina umkhondo womsebenzi wethu, ukongeza ekubeni sikwazi ukungqamanisa nefowuni yethu ngalo lonke ixesha, ukufumana izaziso kuyo. Inketho elungileyo ukuba ujonga isixhobo esirekhoda umsebenzi wakho, nakwixabiso elifanelekileyo.
I-eBay isizisela isongo seXiaomi ngexabiso elikhulu lama-euro angama-23,64, enkosi kwisaphulelo se-21% kwixabiso laso loqobo. Isacholo somgangatho ngexabiso eliphantsi. Ungaphoswa yile ntengiso!
Galaxy Note 9 ngesaphulelo esingu-40% ngexabiso lama-euro angama-649,99
Isiphelo esiphakamileyo samva nje esivela kwi-Samsung, kunye neyona fowuni intle iboniswe kwi-2018 kwi-Android. Yifowuni enesikrini esizi-intshi ezi-6,4 ubukhulu. Njengeprosesa isebenzisa i-Exynos 9810, eyona inamandla kwi-Samsung okwangoku. Kwakhona, i-RAM yi-6GB kwaye ine-128GB yogcino lwangaphakathi. Le modeli iye yaba isiphelo sokuqala senkampani yokufika kunye neekhamera ezimbini zangasemva Kuzo zonke iinguqulelo zayo, ineelensi ezili-12 + ezili-12 ze-MP. Umphambili, ekuvumela ukuba urekhode ividiyo kwi-4K, yi-8 MP. Ikwanayo nebhetri ye-4.000 mAh.
Sifumana isiphelo esiphezulu kwi- Ixabiso elikhulu lama-euro angama-649,99, enkosi ngesaphulelo se-40% abasinike sona kwi-eBay. Ungaphoswa yile ntengiso!
I-Apple iPad enesaphulelo sama-22% ngexabiso lama-euro angama-349,99
Le iPad inesikrini esizi-intshi ezingama-9,7 ubukhulu. Ubungakanani obufanelekileyo xa kufuneka ufunde iincwadi, kodwa nokuba ukwazi ukujonga iifoto, iividiyo okanye iimovie kuyo ngendlela elula, ukongeza ekubeni nakho ukuyiphatha kubhaka wethu ngentuthuzelo epheleleyo. Inokugcinwa kwangaphakathi kwe-128 GB, ngokungathandabuzekiyo esinika ithuba lokugcina isixa esikhulu seefayile ngaphakathi. Isixhobo esaziwa kakhulu kwintengiso, ngoku onokuthi usithathe ngesaphulelo esikhulu kumnyhadala we-11.11.
I-eBay izisa le iPad ngexabiso lama-euro angama-349,99 kolu nyuso. Esi sisaphulelo se-22% xa kuthelekiswa nexabiso laso loqobo. Ukuba ucinga ukuthenga enye, ungaphoswa leli thuba.
I-Galaxy S9 Plus ngesaphulelo sama-41% ngexabiso lama-euro angama-579,99
Isiphelo esiphakamileyo senkampani yaseKorea esiboniswe ekuqaleni kwalo nyaka, kwaye safika okokuqala ngekhamera ngasemva kabini. Imodeli ekumgangatho ophezulu, efika kwisaphulelo esimangalisayo kwi-eBay. Ifowuni inobungakanani bescreen se-6,2-intshi. Ngaphakathi kumqhubekekisi we-Exynos usilindile, sikhatshwa yi-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina ngaphakathi. Inekhamera yangemva eyi-12 + 12 MP ngasemva, ngelixa engaphambili iyi-8 MP. Ibhetri yayo yi-3.500 mAh, eyinika ukuzimela ngokwaneleyo.
I-eBay isizisela esi siphelo siphezulu ngexabiso elikhulu lama-euro angama-579,99. Sisaphulelo sama-41% kwixabiso laso loqobo, ngokungathandabuzekiyo lithuba elihle lokuba nesona siphelo siphezulu salo nyaka. Musa ukuvumela le fowuni ukuba ibaleke!
I-Huawei Mate 20 Pro ngesaphulelo se-14% ngexabiso lama-euro angama-799,99
Isiphelo esiphakamileyo sikaHuawei kunye nenye yeemodeli ezikumgangatho ophezulu ze-Android kulo nyaka, eza nekhamera yayo engasemva kathathu, ehlelwe kwisikwere. Le fowuni inesikrini esizi-intshi ezingama-6,39, kunye nepaneli ye-OLED, ekumgangatho ophezulu kakhulu esiwufumanayo ngoku. Njengomprosesa, bakhethe i-Kirin 980, eza ne-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina yangaphakathi. Ineekhamera ezintathu zangasemva ezingama-40 + 20 + 8 MP, onokuthi uthathe iifoto kuzo zonke iintlobo zeemeko. Ikhamera engaphambili iyi-24 MP. Ibhetri yayo yi-4.200 mAh, ebonelela ngokuzimela okukhulu ngalo lonke ixesha. Inayo inzwa yeminwe eyakhelwe kwiscreen.
Sifumana isiphelo esiphezulu ngexabiso lama-euro angama-799,99 kolu nyuselo kwi-eBay. Ithatha isaphulelo se-14% kwixabiso laso loqobo. Ungaphuthelwa sisiphelo esiphezulu esivela eHuawei ngexabiso elihle!
I-Apple Watch Series 3 ngesaphulelo se-22% ngexabiso le-299,99 euro
Isizukulwana esidlulileyo seewotshi zeApple sihlala siyintandokazi yabasebenzisi kwihlabathi liphela. I-smartwatch esemgangathweni, Uyilo olulungileyo oluhambelana nesihlahla somsebenzisi, kwaye isinika ubuninzi bemisebenzi, eyenza ukuba igqibelele. Siyabulela kuyo, siya kuba nakho ukulinganisa umsebenzi wethu xa sisenza imidlalo, ukongeza ekubeni nokufikelela kwizaziso, ukukwazi ukumamela umculo, okanye ukukwazi ukusebenzisa uSiri, umncedisi wotyikityo. Yiwotshi engenamanzi, ilungele iimbaleki okanye ukuba iqala ukuna ngelixa thina singekho.
I-eBay isizisela olu luhlu lwe-Apple Watch 3 ngexabiso lama-euro angama-299,99 kolu nyuselo. Esi sisaphulelo esihle se-22% xa kuthelekiswa nexabiso laso loqobo. Enye iwotshi elungileyo ekufuneka uyiqwalasele, ngesaphulelo esikhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Hlala phambi kwe-11.11 yeentengiso ngenxa ye-eBay